आफ्नो जीवनसाथीका बारे थाहा पाउनुहोस्: यी ३ राशीका युवती पाउने पुरुष भाग्यमानी ! «
आफ्नो जीवनसाथीका बारे थाहा पाउनुहोस्: यी ३ राशीका युवती पाउने पुरुष भाग्यमानी !
Published : 15 January, 2020 7:28 pm
आफ्नो जीवनसाथीका बारेमा राम्रा वा नराम्रा बानि जान्ने सबै विवाहिताको चाहना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरुको राम्रो ब्यवहार वा पक्ष बुझ्न नसक्दा कहिलेकाहि सम्बन्धहरु टुट्न पनि सक्छ ।यस्तोमा आफ्नो पार्टनरको राम्रो बानिका बारेमा जानि राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा सम्बन्ध टुटेपछि पछुताउनुको विकल्प हुदैन । राशी अनुसार वृष, सिंह र तुला राशिका युवतीहरु प्रेम, विवाह र सम्बन्ध निभाउन निकै माहिर हुन्छन् । त्यसैले यि राशिका युवतीसंग विवाह गर्ने पुरुषहरु निकै भाग्यमानि मानिन्छन् ।
वृष राशी:यदि कोहि युवतीको राशी वृष हो भने ती युवतीहरु मनका दयालु हुन्छन् । उनीहरु कसैलाई चोट वा आघात पुर्याउन चाहादैनन् । मन सफा हुने भएकाले वृष राशीका युवती आफ्नो श्रीमान्लाई धोका दिदैनन् ।उनीहरु श्रीमानलाई खुसी राख्न जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । वृष राशीका युवती श्रीमानलाई धेरै माया गर्ने र भगवानमा आस्था राख्ने स्वभावका हुन्छन् ।
सिंह राशी:यदि कोहि युवतीको राशी सिंह हो भने ती युवतीहरु हरेक ढंगबाट उत्कृष्ट श्रीमती हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना श्रीमानलाई कुनै कुरा पनि लुकाउँदैनन् ।हुनत सिंह राशीका युवतीहरु ठूलो सपना देख्दछन् तर उक्त सपना पुर्ण गर्न वा सफल पार्न हरदम लागी पर्दछन् । उनीहरु जीवनमा पैसासंगै प्रतिष्ठा समेत कमाउने क्षमताका मानिन्छन् ।
तुला राशी:यदि कोहि युवतीको राशी तुला हो भने ती युवतीहरु आफ्ना श्रीमान् प्रति निकै बफादार हुन्छन् । तुला राशीका युवती आर्कषक मुहार र जिउडालका समेत हुन्छन् ।तर उनीहरुको सुन्दरताका बिषयमा खासै ध्यान हुदैन । उनीहरु जोसंग प्रेम गर्छन् उहिँसंग जिवन बिताउने चाहाना राख्दछन् । यस्ता युवतीसंग विवाह हुने पुरुष निकै भाग्यमानि मानिन्छन् ।
आफ्नो जीवनसाथीका बारेमा राम्रा वा नराम्रा बानि जान्ने सबै विवाहिताको चाहना हुन्छ ।कतिपय अवस्थामा उनीहरुको राम्रो ब्यवहार वा पक्ष बुझ्न नसक्दा कहिलेकाहि सम्बन्धहरु टुट्न पनि सक्छ ।यस्तोमा आफ्नो पार्टनरको राम्रो बानिका बारेमा जानि राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा सम्बन्ध टुटेपछि पछुताउनुको विकल्प हुदैन । राशी अनुसार वृष, सिंह र तुला राशिका युवतीहरु प्रेम, विवाह र सम्बन्ध निभाउन निकै माहिर हुन्छन् । त्यसैले यि राशिका युवतीसंग विवाह गर्ने पुरुषहरु निकै भाग्यमानि मानिन्छन् ।
कोरोना कहर समाप्त होस् भन्दै आज पशुपतिमा विशेष आरति सेयर गर्नुहोस,भगवान पशुपतिनाथले हामिसम्पूर्णको कल्याण गरुन।
काठमाडौँ, असार २५ गते । काठमाडौं : विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण समाप्त
अनलाइनमा यसरी क्लिक गरे कि २८ वटा टेस्ला कार खरिदका लागि अर्डर गयो
जर्मनीमा एकजना व्यक्तिले भुलबस अनलाइनमा यसरी क्लिक गरे कि २८ वटा टेस्ला कार खरिदका लागि
भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ !
मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित
विश्वभर भाइरल बनेका यस्ता छन् नेपालीको यौनकाण्ड
नेपाली युवामार्फत विदेशबाट चलेको एउटा अश्लिल साईटले नेपालका झण्डै ३ हजार बढि महिलाको अश्लिल दृश्य